घर क्लासिक फुटबॉलर जोस एन्टोनियो र Reyes बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण कहानी को एक स्वर्गीय फुटबल कथा को प्रस्तुत गर्दछ जो सर्वनाम को साथ सर्वोत्तम ज्ञात छ "ला पेरला". हाम्रो जोसेन एन्टोनियो रेपिन्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बिद्यार्थी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाता आफ्नो बचपनको समय सम्म।
विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा / करियर निर्माण, क्यारियर सारांश, उनको मृत्युको कारण, सम्बन्ध जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, र जीवनशैली तथ्याङ्क आदि समावेश छ।
हो, सबैले उनीहरूलाई मात्र एक शस्त्रागार र सेलिला किंवदंतीको रूपमा थाहा थिएन, तर त्यो प्लेस्टेशन प्लेयरले इलेक्ट्रिक गतिको साथ।
जोस एन्टोनियो रेपिन्स सम्झना क्रेडिट साइप्रस मेल र eBay
तथापि, फुटबलका केही प्रशंसकहरू मात्र एक हात जोस एन्टोनियो रेपिन्स जीवनीमा विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
यसअघि, प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
जोस एन्टोनियो रेपिन्स सितंबर 1 को 1983st दिन मा उनको आमा, माईरी Calderon र पिता, यूट्ररा, स्पेन मा फ्रान्सिस्को Reyes को जन्म भएको थियो। तलका एन्टोनियो रेपिन्स आमाबाबुको तस्विर हो जुन लिखित समयको रूपमा उनीहरूको ढिलाइ 60 मा हुन सक्छ।
जोसेन एन्टोनियो रेपिन्स आमाबाबु - मारी र फ्रान्सिस्को
रेपिन्स उल्टरा, सेलिल प्रान्तमा रोमी आमाबाबुमा हुर्के। "रोमानिया" शब्दमा शब्द ल्याईएको, रेयेसले उत्तरी भारतीयको पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई आधुनिक भारतको पंजाबी क्षेत्रहरूमा रहेको छ। उहाँ एक्लै आमाबाबुसँग हुनुहुन्न। रेबेस थियो एक भाइ जो नाम जेस्स रेपिन्स द्वारा जान्छ।
यसअघि, सारांशमा क्यारियर
फुटबलको लागि रेजेस जुनूनले उनलाई 10 उमेरमा स्थानीय सेभिला एफसीको युवा रेन्टिङ्मा सहभागी देखाए। एक खुशी राइज सबै युवा स्तरको क्लबको प्रतिनिधित्व गर्न गए।
जोस एंटोनियो रेपिन्स अर्ली लाइफ। क्रेडिट CaT
रेबेस सेविलाका लागि बहुमुखी आपत्तिजनक एकाइको रूपमा आफ्नो प्रतिष्ठा स्थापित भयो। रेयनले अन्ततः 1999 मा पूर्ण अनुबंध मा हस्ताक्षर गरे, जसलाई 16 को निविदा उमेर मा उनको मुख्य स्काड डेबट्स बनाइयो।
उनको क्यारियरको सबैभन्दा राम्रो क्षण थियो जब उनी शस्त्रागारको 'इन्निन्सिबिल्स' टोलीको भाग बनेका थिए जसले हारको बिना 2004 प्रिमियर लिगको जित जिते।
जोस एन्टोनियो रेपिन्स लाइफको सबैभन्दा राम्रो क्षण
इमिलीओ सालाको दुखाइ मृत्यु पछि मात्र, फोटोबेलले आफैंलाई अर्को ताराको हानिमा मारेका थिए किनभने यो पुष्टि भएको थियो कि जोस एन्टोनियो रेपिन्सको मृत्यु भयो।
35 जून 1 को 2019 को उमेर मा रेयेस को मृत्यु भएको एक कार दुर्घटना पछि के "ट्राफिक टकराव"। उदासीन घटना आफ्नो देश सडक- A-376 मा भयो, एक Seville, स्पेन संग Utrera लिंक।
जोस एंटोनियो रेपिन्स दुर्घटना। गन्डम ओटजबस को क्रेडिट
अनुसार सूर्यउनको गाडीको जोनाथन रेपिन्सको साथ उनको गाडीमा राइसेसलाई मारिएको थियो जब उनको गाडी टक्कर थियो र त्यसपछि आगोमा फसेको थियो। एक नजिकको स्रोतको अनुसार, रेबेन्सले एक बन्दोबस्तीमा गाडी चलाउन मरे।
दुर्घटनाको वास्तविक कारण:
स्पेनिश पुलिस प्राधिकरणहरूको अनुसार, जोस एन्टोनियो राइई 135mph (220kmph) भन्दा बढि ड्राइभिङ्ग हुँदै गएको थियो। यसले 75mph / 120kmph को स्पेनको गति सीमा पार गर्यो। एक सभ्यताबाट बचाउनको असक्षम कारण दुर्घटना र मृत्युको कारण थियो।
दुःखको कुरा, तिनको मृत्यु टोनमहाम र लिभरपूल बीचको 2018 / 2019 UEFA चैंपियंस लीग फाइनलमाको दिन भयो। निस्सन्देह, फुटबलका प्रशंसकहरूको लागि एक शुभ दिन अचानक एक मृत्यु पछि उनको मृत्यु पछि लागियो। पूर्व शस्त्रागार लीजेंड उनको मृत्यु को समयमा 35 वर्ष पुरानो थियो। रेपिन्स, तपाईंको प्राण शान्तिमा रहिरहन्छ !!
यसअघि, सम्बन्ध जीवन
ढिलाइ आर्सेलियन लेजेंन्ड को पछि, त्यहाँ नैएलिया रानी को सुन्दर व्यक्ति मा एक ग्लैमरस पत्नी अस्तित्व थियो जसको बारे मा थोडा जान्दछ।
ढोका जोस एन्टोनियो राइज र पत्नी-नोएलिया। आईजीको क्रेडिट
सूर्य इकट्ठा भयो कि दुवै प्यार पक्षीहरु जुन जून 2017 मा उनको गृहनगर Utrera मा भाइरस डे ला कन्सोलेशन चर्च मा एक समारोह मा गाँठ बाँधिएको थियो।
ढोका जोस एंटोनियो र Reyes र उनको पत्नी- नोएलिया। क्रेडिट सूर्य.
एण्टोनियो राइबेसको मृत्यु हुनुअघि, उनी र उनको श्रीमतीले आठ वर्षको साथ मनाए। उनीहरूको फोटो इन्स्टाग्राममा नोएलिया पोस्टिंग गर्दै थिए।
"जब तपाईं केहि पनि सोध्नुहुन्न र तिनीहरूले तपाईंलाई सबै कुरा दिन्छन्। मैले बुझें कि सबैजना कहाँ छ र उनीहरुसँग हुन चाहन्छन् जुन कहाँ छ। शुभ 8 वर्ष मेरो माया। "
सानो गरीब उनीहरु, सम्पूर्ण रेयेस परिवार र फुटबल खेलाडीहरू जान्दथे कि उनी विवाहका लागि केवल दुई वर्षको हुनेछैनन्। रानीले आफ्नो चित्र र सुन्दर छोरीलाई तल चित्रण गरेकी छिन्।
जोस एंटोनियो राइनी पत्नी र छोरी। आईजीको क्रेडिट
यसअघि, मृत्यु हुनु अघि जीवनसाथी
उनको मृत्यु भन्दा पहिले, जोस एन्टोनियो राइई कारहरुको प्रेमी थियो। उनको पसंदीदा बीएमडब्ल्यू सीरीज थियो। छिटो कारहरूको लागि उहाँको प्रेम उहाँको मृत्युको वरिपरिको अवस्थाबारे प्रश्न उठाउँछ।
जोस एन्टोनियो र Reyes LifeStyle
यसअघि, पारिवारिक जीवन
उनको मृत्यु हुनुअघि रेयेसलाई "महान् परिवार म्यान"जो आफ्नो आमाबाबु र उनको उत्प्रेरक को उत्प्रेरित स्पेनिश स्पेनिश समुदाय को छ, जो उनको जन्म र मृत्यु दुवै को स्थान हो।
जोस एन्टोनियो र Reyes परिवार
मारी र फ्रान्सिस्को दुवैले कठोर मानसिकतालाई उनीहरूको पुत्रमा फर्काउनका फाइदाहरू फर्काए। दुःखको कुरा, जुन 1ST 2019 साँच्चै रेबेसका आमाबाबुको लागि एक उदासीन दिन थियो किनभने उनी उसलाई आगोबाट मृत्युको चिसो हातमा गुमाए।
उनको मृत्यु भन्दा पहिले, जोस एन्टोनियो रेपिन्स सोशल मिडियामा उनीहरूको फोटोबाट हेर्दा उनीहरूको बुबा भन्दा उनीहरूको आमाको नजिक हुन थाले।
जोस एंटोनियो र Reyes र उनको आमा- मारी क्याल्डरन
रेपिन्स अन्तिम नाम "क्याल्डरन"यसको मूल हो आफ्नो आमा बाट जो आफ्नो पति फ्रान्सिस्को मा विवाहित विवाह गर्नु अघि उपनाम बन्छ।
यसअघि, अन्य तथ्यहरू
तपाईंलाई थाँहा थियो?… 2012 मा आफ्नो केटाकेटी क्लब सेभिलामा फर्काउँदा जोस एन्टोनियो रेजिस र तिनको परिवारको लागि उनीहरूको घर फर्केर हेर्दा ठूलो आनन्द थियो। क्लबमा हुँदा, रेजस 2014 र 2016 को बीच तीन लगातार यूरोपा लीग खिताब लिनु भयो।
2006 / 07 सिजनमा रियल म्याड्रिडको साथ ऋणमा पनि, रेपिन्स पनि ले Liga शीर्षक जित्नको लागि गए।
जोस एन्टोनियो र Reyes बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - भिडियो सारांश
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Jose Jose Antonio Reyes Childhood Story plus Untold जीवनी तथ्य पढ्ने धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
Ricardo Kaka Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य